10 Zvinhu 8 Maawa kuCES 2017 Akandidzidzisa Nezve Mangwana Tech | Martech Zone
Chishanu, January 13, 2017 Mugovera, October 20, 2018 John Koetsier
Kunge idiot, ini ndakabatana ne165,000 mamwe magajeti-anoongorora tekinoroji, vashambadzi, vanokanganisa, hucksters, uye vamwe vakabatana paCES 2017 svondo rapfuura.
Iyi mota ine gadheni padash
Nguva yangu zhinji ndaipedza kusangana nevanhu. Kana, zvakanyatso kurongeka, muLyfts, Ubers, uye macab anoshinga Vegas traffic kubva kugehena ndichienda kunosangana nevanhu. Asi ini ndakachengetera maawa masere kune chimwe chinhu munhu wese anoda tekinoroji anofanira kuita kanokwana kamwe chete: kudzungaira pasi peidzi dzimba huru dzemusangano kuCES, iyo Consumer Electronics Show.
Uri kuonei? Unoona mangwana.
Kana, zvirinani, zviratidzo zvemangwana zvinogona kana kusazadzika.
Vazhinji tarisiro havadaro, senge ma radiation-proof boxers evarume, majeanshort madiki evakadzi vechidiki vanopisa ayo anodedera kuti avaudze nzira iyo Google Mepu inoda kuti vafambe nayo, kana chero eanove mashanu eakasiyana "marobhoti" marobhoti anoda kuve ako chaiwo shamwari, kupwanya, kana kutsiva chakakosha chimwe, kunyanya kana uri wechiJapan, mudiki, uye murume.
Asi kufamba pasi kwakaita kuti zvive pachena kwandiri kuti paive neanenge gumi mega-madiki anonyudza makambani eatekiniki yevatengi.
Pano ivo vari, pasina chairo hurongwa.
1: Pet zvinhu
Handizivi izvi kubva pane zvakaitika kwandiri, asi sezviri pachena isu chaizvo, tinonyatsoda zvipfuwo zvedu. Uye, isu tinonyatsoda kuve tisipo padyo navo.
Saka isu tinoda inodhura pet tech iyo inotibvumidza isu kufudza dzinovaraidza zvedu zviri kure kuburikidza nemaapps pane edu mafoni mafoni. Uye isu tinofanirwa kukwanisa kutaura nevhidhiyo navo kuti vazive kuti tinovada, uye tichava kumba nekukurumidza.
Kana zvirinani kana otomatiki peturu feeder yapera kunze kweKibbles & Bits.
2: smart imba kukiya
Pachiitiko che-pre-CES "Pepcom" apo varatidziri vanobhadhara zvakanyanya vanogona kuburitsa zvinhu zvavo kudhinda maflunkies akakwezvwa nechikafu chemahara uye vakadzi vadiki, vanokwezva mukoreji kochi cheerleader zvipfeko (ini handisi iwe), handina kuona asingasviki mashanu, asi pamwe matanhatu, kana pamwe makambani masere ane smart kukiya.
Iyi smartwatch isingaite kunge smartwatch…
Ini handigone kuve nechokwadi cheiyo chaiyo nhamba nekuda kweiyo yemahara Corona iyo varongi vanomanikidza kudurura huro yangu.
Chero zvazvingaitika, makiyi ari padanho rekutsakatika, pamwe, izvo zvakanaka nekuti simba harimbodzima munharaunda medu. Asi isu tichakwanisa kupa vatisingazive chaiwo makiyi-anodzorwa makiyi ane nguva-yakatemwa yekuwana yekudzora kuchenesa dzimba dzedu, kudonhedza zvinhu nemasevhisi, uye pfuti kuburikidza nezvinhu zvedu.
3: Massage chair
Vatori venhau vanoziva zvese nezve masaja chair kuCES. Panguva ino, ndakaenda chinhu chekutanga mangwanani, pamberi pevanhu vanopenga vasati vatombobvumidzwa kupinda pagedhi reimba.
Zvinhu zviviri zvakanaka nezve masaja cheya: vari kudhura (funga madhora mazana matatu nemazana mashanu, kwete madhora zviuru mazana manomwe), vari kuita zvirinani, uye ivo vari kutanga kuwana dhizaini inoita senge inogona kukodzera mune yako yekushongedza imba pasina kukuita kuti utaridzike yakazara jerkoff.
(Ehe, ndinoziva kuti vatatu, asi iyo Corona yakave nemhedzisiro. Ndibvunze.)
Verenga chikamu chekupedzisira zvakanyatsonaka. "Kutanga" kuwana dhizaini iyo "inoita senge" iyo "inogona" chaizvo kwete kukuita iwe kuti utaridzike senge jerkoff. Mune mamwe mazwi: kwete ipapo ipapo. Chinhu chakanaka nezve ichi dhizaini chinokundikana: zvinokusevha zviuru.
4: 4K uye 8K maTV
4K ingangoita tekinoroji inoshamisa, uye ndiri kutarisira kuitenga kana zvirimo zvandinowana kubva kune yangu satellite satellite, Netflix, Youtube, iTunes, uye zvimwe zviwanikwa chaizvo zviri semi-kazhinji zvinotsigira.
(Uye pandinogona kuikurira kumba kwangu ndisina kuikanda husiku hwapfuura.)
Asi 8K iri nani kupfuura 4K. Kaviri sezvakanaka, sekuziva kwako kana iwe uchinyanya kugona pamasvomhu. (Chaizvoizvo 4X zvirinani, kana iwe uchishamisa pamasvomhu.)
Uye ndafunga kuti ndakabatirira iyo 98 ″ 8K TV yandaona muSamsung gargantuan CES dumba. Mutengo uri $ 400,000, asi ini handisi kunetsekana nazvo, nekuti oligarchs veRussia uye VC-yakatsigirwa Silicon Valley Series B startups vachatenga zvakakwana kuti vawane mari yekuwedzera zvigadzirwa zvigadzirwa izvo zvichatora iwo mutengo pasi akati wandei mirairo yehukuru mumakore mashanu anotevera.
Panguva iyoyo, zvirimo zve 4KK zvinogona kunge zvichimboita zvakajairika, uye ndinogona kutenga imwe doodad yekurembedza TV kuti ndiikwidziridze ku8K pasina "kurasikirwa kunonzwisisika kwehunhu."
5: Drones anonyatsoita zvinhu
Gore rakapera CES yakaratidza drones. Uye drones. Uye mamwe drones. Gore rino, zvaive zvakasiyana zvakanyanya.
Drone yakajeka paCES. Uyu haaite chero chinhu (kunze kwenhunzi)
Paive kuchine drones, uye drones, uye mamwe madroni. Asi aya madrones anoita zvinhu. Zvirinani mune zvakanyatso kunyorwa uye chete-zvishoma-akadzorera mavhidhiyo kubva kune vasina rusarura vagadziri.
Ndakaona madrones anoita pro movie-chikamu vhidhiyo. Drones iyo nhangemutange. Drones iwe aunogona kupfura. Mauto drones. Border patrol drones. Kurima drones inopfapfaidza mishonga yezvipembenene asi chete munzira-inogamuchirwa nzira. MaDrones anotora mitezo ichangobva kukohwewa kubva kumacadavers kuenda kuzvipatara kwavanoda Uye madrones anounza pizzas kana iwe uine nzara, simbe, uye usingafarire chikafu chine hutano.
Uyezve, chokwadika, pfuti-yekuuraya pfuti.
Ichokwadi chiri kutakura uye chisina kujairika - semuenzaniso: rakawanda rebasa rako. Kuwedzera kwechokwadi kunonzwika zvakanyanya… kunowedzerwa, chokwadi chaicho chiri nani, uye musanganiswa wechokwadi mhando yekusanganisa zvakanakisa zvepasirese.
Tarisa, Ma, ndiri kubhururuka…
Ose ari matatu aive nezviratidzo paCES 2017, iine mahedhifoni anodhura eVR ayo anotendera iwe kubata foni yako masendimita mashoma kubva kumeso kwako uye uone mashandisiro anoita pikisi iyo inonzi yakakwira-tsananguro-kupfuura-tsananguro skrini iri chaizvo kupfuura makambani eVR ayo chaizvo vanopona kusvika pagore rinouya.
Asi vashandi veZeiss vakapotsa vasimbisa kuti Apple iPhone 8 ichaita yakawedzera chokwadi.
7: Wireless zvese
Tambo dzese, vatengi tekinoroji vanoita kunge vakadzika, vanofanirwa kufa. Idzi ndidzo nhau dzinogamuchirwa kwandiri, semuridzi anodada wePlayStation VR yakaiswa newaya kupfuura Apollo 13.
Zvese zvakasikwa zvinopa uye zvakasikwa zvinotora, zvakadaro, uye izvozvi mabhatiri akanyanya, akakosha kwazvo.
8: Smart zvese
Artificial intelligence ndiyo nyowani "zvese zvakasikwa," mumwe munhu achangobva kutaura, uye zvakajeka vese vatengesi vegajeti vakawana meseji panguva imwe chete, pre-CES.
Zvese zvinhu zvakangwara, zvese zviri AI-zvinowedzerwa, uye zvese zvinogara zvichidzidza nguva dzese maitiro ekukushandira iwe zvirinani nediki diki rekuwedzera marongero zvichienderana nekushandisa. Mutemo mutsva wakapasiswa neCongress, uye hapana zvigadzirwa zvitsva - mabhurasho emvere, zvimbuzi, uye makapu akasanganisirwa - zvinogona kuvhurwa pasina yakazara maseru, mawairesi, makamera, machipisi, uye, chokwadika, iyo yakabatana app inodzora iwo ese.
9: Kukurukurirana mushandisi maficha
Sezvo isu tese tichiziva, kuburitsa foni, uchizvisimbisa, kutsvaga nekuvhura app, uye kutarisa pachiratidziri chako chaizvo, chaizvo 2016.
Mota yangu neGoogle, zvakaita, akanakisa buds
Muna 2017, isu tinongotaura neyedu tech.
Uye izvo, hongu, inotaura kumashure kwatiri.
Amazon Echo inopfuura gore rimwe chete, chokwadika, asi 2017 ndiro gore ririkuzoputika, iine huwandu hwe "hunyanzvi," kana mini-maappu ayo ayo anomhanya, achiwedzera zvakapetwa muvhiki rimwe chete reCES. NaCortana, Viv, Google Mubatsiri, uye hongu, gogo Siri, isu tine ramangwana rakakosha rehunyanzvi hwekutaura hwakatungamira munzira yedu.
10: Yakawedzera chokwadi kune nzeve
Kuratidza maziso zvinhu zvisiri zvechokwadi ndechimwe chinhu. Asi hazvina kunaka kusiiwa, uye nzeve dzaumba komiti yezvematongerwo enyika yekuona kuti kodzero dzavo dzinoremekedzwa.
Saka chaicho chakawedzerwa kune nzeve chaive chinhu kuCES, uye kutaura chokwadi, chinhu chikuru.
Vagadziri vari kuburitsa AirPod -style mune-nzeve zvishandiso zvinotonhorera zvakanyanya kupfuura zvinobatsira baba vako zvekunzwa, uye rega iwe usarudze mutinhimira unotsamwisa - sezwi remumwe wako - kunze. Sanganisa izvi neakavimbika uye akawedzera echokwadi mahedhifoni, uye iwe uchakurumidza kugona kudzora mafirita ekufunga ayo anotendera iwe kuumba chaichoicho chaizvo izvo zvaunoda kuti zvive
Mune mamwe mazwi, seyako Facebook chaiyo bubble, asi kunyange zvirinani.
Asi… ini ndichiri kuda tech
Izvo zvinonakidza kuseka kuseka pane matsva magadheti kuCES. Asi kuve wakakomba kwekanguva kamwe chete, zvinonyanya kunakidza kungofamba pasi uye kushamisika nekusiyana kwemagadget ayo vanhu vanorota.
Uye kuziva kuti neimwe nzira, neimwe nzira, mamwe eaya anozove akakurisa mune isiri-zvakare-kure ramangwana.
Tags: 20174k materevhizheni4k maTV8k materevhizheni8k maTVaiartheseizvi 2017mutengidronesmidziyolas vegasmassae chairmrteknolojia yezvipfuyodzinovaraidzadzimba dzakangwaradzimba dzakanakaTechnologyizwivrWireless
John Koetsier mutori wenhau, muongorori, uye ramangwana. Sezvo Mobile Economist pa TUNE, Ini ndinofungidzira uye kuongorora matanho anokanganisa nharaunda nhare. Ini ndanga ndiri mutori venhau, muongorori, uye mukuru wekambani, uye ndarondedzera kukwira kwehupfumi hwenhare. Ndisati ndapinda TUNE, ini ndakavaka iyo VB Insight timu yekutsvagisa kuVentureBeat uye ndakakwanisa zvikwata kugadzira software yevakabatana vakaita seIntel neDisney. Uye zvakare, ini ndakatungamira zvikwata zvehunyanzvi, ndakavaka masayiti enharaunda uye nharembozha, uye ndakabvunza panharembozha, pasocial, uye IoT. Mu2014, ndakatumidzwa zita kuFolio's top 100 yemidhiya indasitiri "" vane hunyanzvi vezvemabhizimusi uye vatengesi vanozadza musika. " Ndiri kugara kuBritish Columbia, Canada nemhuri yangu, kwandinodzidzisa baseball nehockey, kunyangwe zvisiri panguva imwe chete.
Chii chinonzi Demand-Side Platform (DSP)?
Jan 14, 2017 na12:46 PM
Hi john yaive nyaya inodzidzisa.
Jan 14, 2017 na5:10 PM
Ndatenda! Ndinovimba zvainakidza futi 🙂
Jan 15, 2017 na10:51 PM
Tekinoroji iri kushandura nyika. Tenda kuti tiri kutarisira kusangana nematerminators chaiwo. Mumwe muenzaniso wakanaka ndeweGoogle, maitiro avo ekutsvaga semantic algorithm inoita kuti mubvunzo wekutsvaga uwedzere kukosha. Kudzidza kwemichina kunoita basa rakakosha sei mukunzwisisa mabatiro ekuita nevanhu uye kuita sarudzo kubva pazviri. Ndakaita hurukuro neSemantic yekutsvaga nyanzvi David Amerland, Kana yangoburitswa ndinokuzivisa. Mubvunzurudzo David anotsanangura zvakajeka kuti kutsvaga kunoitika sei.
Jan 16, 2017 pa 11: 34 AM
Kutarisira kutarisira kunzwa zvaunonzwisisa!